किन पाएनन् ज्येष्ठ नागरिकले दशैँमा भत्ता ? « Lokpath
२०७५, ४ कार्तिक आईतवार ०३:५४
किन पाएनन् ज्येष्ठ नागरिकले दशैँमा भत्ता ?
प्रकाशित मिति : २०७५, ४ कार्तिक आईतवार ०३:५४
बाजुरा । बाजुराको बूढीनन्दा नगरपालिकाले यस आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण नगरेपछि ज्येष्ठ नागरिकले दशैँमा पनि भत्ता पाएनन् ।
दशैँमा नगरपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण नगरेपछि ज्येष्ठ नागरिकले यस वर्षको दशैँमा खल्लो महसुश गरेका हुन् ।
हरेक वर्ष दशैँको बेलामा प्रथम चौमासिक भत्ता दिइने गरिएको भए पनि यस वर्ष नगरपालिकाले दशैँमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिएको कोल्टीका ज्येष्ठ नागरिक चन्द्रमान रेग्मीले बताए ।
स्थानीय सरकार आएपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन सहज होला भन्ठानेका ज्येष्ठ नागरिकले स्थानीय तहले लापरवाही गरेर ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र अन्य सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाउनेको सेवासुविधामा खेलबाड गरेको गुनासो गरेका छन् ।
बूढीनन्दा नगरपालिकामा करीब एक हजार २०० ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र बालबालिकाका लागि प्रतिचौमासिक करीब रु एक करोड १० लाख सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने गरिन्छ । बूढीनन्दा नगरपालिकाका सूचना अधिकारी रामदत्त न्यौपानेले कामको चापले हतार भएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न नसकेको बताए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढिलो आएपछि अन्य कर्मचारीलाई समेत तलब खुवाउन समस्या भएको र ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि वितरण गर्न नसकिएको उनले स्वीकार गरेका छन् । ।
कोरोना प्रयोगशालाका कर्मचारीले पाएनन् पारिश्रमिक
गुल्मी । गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासस्थित कोरोना परीक्षण प्रयोगशालामा कार्यरत कर्मचारीले तीन महिनादेखि पारिश्रमिक
अभिनेता सैफ अली खानको घरमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ
काठमाडौं । बलिउड अभिनेता सैफ अली खानको वेब सीरीज ताण्डवको विवाद झनै चर्किंदै
धनुषा । ‘जनकपुर–जयनगर रेल्वे’ यही माघको अन्तिम सातादेखि सञ्चालनमा आउँदैछ । नेपाल रेल्वे
हिन्दू शास्त्रमा मानिसको विभिन्न अंग फर्फराउँदा हुने विभिन्न घटनाबारे लेखिएको छ । मानिसको
स्वास्थ्य स्वयंसेविकाद्वारा काम अनुसारको सुविधा नपाएको गुनासो